4-ta, Nofeembar, 2020, Mudane PETER FRANZ, Madaxa Injineerka Teknolojiyadda iyo R&D of Grace, wuxuu si wada-jir ah u wadaagay tikniyoolajiyadda "Teknolojiyadda keydinta tamarta ee Xudduudda iyo Isbeddellada Horumarinta ee Waxsoosaarka Mashiinka Caaga" shirkii jaraa'id ee Hall 5 ee Nanjing International Expo Ce ...
La hadal warshad heer caalami ah Manitowoc oo ka wada hadal mustaqbalka wadajirka!
by idaacadda Subaxnimo 20-09-04
Subaxnimadii Sebtember 3, Mudane Lei Wang, Madaxweyne Ku-Xigeenka Sare ee Suuqyada Ganacsiga ee Manitowoc Tower Machinery iyo Madaxweynaha Gobolka Shiinaha, iyo xisbigiisa waxaa lagu casuumay inay booqdaan Grace. Labada dhinac waxay si qoto dheer oo xamaasad leh isu weydaarsadeen wax soo saarka caatada ah ee soosaarida horumarsan ...
Cusbooneysiinta tikniyoolajiyadda, Caagagga ayaa qaabeeya mustaqbalka!
3-dii Sebtember, 2020, injineer sare Mr.PETER FRANZ oo ka yimid Jarmalka ayaa si rasmi ah ugu biiray Grace Makiinado. Iyadoo leh khibrad 37 sano ah tikniyoolajiyadda extrusion caag ah R&D iyo maaraynta naqshadeynta, Mr. Peter FRANZ wuxuu ka soo shaqeeyay R&D iyo maareeyaha iibka ee DROSSBACH (Jarmalka), isagoo maamule guud ka ahaa Batten ...
1600mm PE Line tuuboyinka Extrusion
Dhawaan, khadka wax soo saarka tuubbada ee 1600mmPE ayaa si guul leh looga bilaabay warshadda macmiilka oo si xasiloon ayuu u socday. Macaamiilku wuxuu si aad ah uga hadlay waxtarka iyo hufnaanta injineerada hawlgalinta ee Grace! Sanado badan oo khibrad wax ku ool ah, Grace ayaa horumartay oo p ...
GRACE 630mm & 1200mm PE Lines Extrusion Khadadka waxaa si guul leh u ansixiyay Shirkadda Gobolka ee Warshadaha Dhismaha (SCCI) / Wasaaradda Macdanta Warshadaha ee Ciraaq
Hambalyo! GRACE 630mm & 1200mm PE Lines Extrusion Khadadka waxaa si guul leh u ansaxiyay Shirkadda Gobolka ee Warshadaha Dhismaha (SCCI) / Wasaaradda Macdanta Warshadaha ee Ciraaq! Kani waa mashruuc weyn oo ka socda Wasaaradda Warshadaha Ciraaq. Mr. Manhal Aziz Al Khabaz, Wasiirka Wasaaradda ...
Hordhaca Bandhigga: INTERPLASTICA waxaa maalgaliyay Shirkadda Dusseldorf Exhibition Company, oo ah shirkad caan ku ah carwooyinka Jarmalka oo ku taal warshadaha soo bandhigida caagagga, waxaana si buuxda u taageeray Wasaaradda Warshadaha iyo Tamarta ee Dowladda Federaalka Ruushka, Wasaaradda Waxbarashada iyo Scie .. .
Waxyaabaha ku saabsan carwada Bandhigga Wershadaha Caalamiga ah ee Caagagga ee Masar (PLASTEX) waxaa la aasaasay 1993, waxaana martigeliyey ACG-ITF, oo ah qabanqaabiyihii ugu weynaa ee carwooyinka Afrika iyo Bariga Dhexe, wuxuuna taageero xooggan ka helay ururka warshadaha caagagga maxalliga ah. Waa tan ugu weyn ...
1200mm PE Line tuuboyinka Extrusion
Macaamiisha dibedda laga soo habeeyay 630-1200mm HDPE khadadka waxsoosaarka extrusion-ka ayaa si guul leh u degay siminaarkii GRACE! Soo-saaraha: wuxuu qaataa xakamaynta qiyaasta mitirka cufnaanta, furfurnaanta waxtarka sare iyo foosto, saxanka culus ee culus ee sanduuqa qalabka Siemens; Taangiyada habeynta faakiyuumka: adoo isticmaalaya saxanka nylon, ...
Waxaan kuugu hambalyeynayaa iskaashiga istiraatiijiyadeed ee GRACE iyo OPW
Dhammaan dhinacyadu waxay ku heshiiyeen inay u hibeeyaan iskaashi qotodheer duurka caagagga, gaar ahaan horumarinta wadajirka ah ee mashiinka gaarka ah. Waa in la ogaadaa in GRACE uu noqday mashiinka kaliya ee mashiinka wax lagu shubo ee caag ah ...
315-800mm HDPE Khadadka Waxyaabaha Dhuxusha
Ka dib dabaaldeggii xilliga gu'ga ee Shiinaha, koox injineer ka takhalusay Grace ayaa si buuxda ugu hawlanaa qashin-qubka. Dhawaan, injineer khalad ka shaqeeya Mr. Wang Lei ayaa u safray Iran si uu u soo afjaro guul iyo xasillooni uu ku socdo saddexda lakab ee wax soo saarka tuubbada OD800mm PE. Macaamiil sare ...
GRACE Heshiisyada Iskaashiga Mashiinka La Saxeexay ee Nidaamyada Shucaaca
Dhawaan, Grace waxay heshiis iskaashi istiraatiiji ah la saxiixatay Radius Systems. Wadashaqeynta istiraatiijiyadeed waxaa lagu gaadhay iyada oo ujeedkeedu yahay horumarinta iskaashi qoto dheer oo ku saabsan dib-u-warshadaynta caagga, iyadoo tiknoolajiyad casri ah ay si joogto ah u kobcinayso horumarinta warshadaha. Soo saare ahaan ...
Iskaashi Istiraatiijiyadeed oo lala yeesho OPW
Dhammaan dhinacyadu waxay ku heshiiyeen inay u hibeeyaan iskaashi qotodheer duurka caagagga, gaar ahaan horumarinta wadajirka ah ee mashiinka gaarka ah. Waa in la ogaadaa in GRACE ay noqotay shuraakada kaliya ee mashiinka wax soo saarka balaastigga ah ee iskaashi u leh ganacsiga caalamiga ah ee OPW. Waxaan ku faraxsanahay inaan idinla wadaagno G ...